ဘေဘီလေးတွေ လေးဖက်မထောက်တာ ပုံမှန်ပဲလား ....... - Hello Sayarwon
ဘေဘီလေး တစ်ယောက် မွေးဖွားလာပြီဆိုရင် သူတို့လေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ရတာက မေမေဖေဖေ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ရဲ့ မမောမပန်းလုပ်ဆောင်မိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုနော်။ ဘယ်သူ့ ကလေးလေးကတော့ ခေါင်းမတ်မတ်လေး ထောင်နိုင်ပြီ အိမ်က ဘေဘီလေးရော ခေါင်းသေချာ မတ်နိုင်ရဲ့လား။ ဘယ်သူ့ မြေးလေးကတော့ စကားပြောပြီ အိမ်ကမြေးလေးက စကားပြော နောက်ကျနေတာများလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုကလည်း အမြဲလိုလို ကြီးစိုးနေပါတယ်။
အခုတစ်ခေါက်တော့ မေမေဖေဖေ ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတို့ စိုးရိမ်နေလောက်မယ့် ဘေဘီလေး လေးဖက်မထောက်သေးတာ ဘာကြောင့်လဲ။ လေးဖက်မထောက်ဘဲ မတ်တတ် တမ်းရပ်တာက ပုံမှန်ပဲလားဆိုတာလေးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
လေးဖက်ထောက်တာက ဘေဘီလေးကို ဘယ်လိုတွေ ထောက်ကူပေးလဲ …….
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘေဘီလေးတွေရဲ့ အသက်အရွယ် အလိုက် ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့်ဆင့်က မတ်တတ်မရပ်ခင်၊ လမ်းမလျှောက်ခင်မှာ လေးဖက်ထောက်တာက ပုံမှန် ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့် တစ်ရပ်ပါ။ လေးဖက်ထောက်တာက ဘေဘီလေးရဲ့ အာရုံခံ ကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပြီး အာရုံကြော ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကောင်းမွန်စေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
လေးဖက်ထောက်တာက ဘေဘီလေးကို လက်နဲ့ မျက်လုံး ဟန်ချက်ညီညီ လှုပ်ရှား လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ထောက်ကူပေးပြီး ခြေလက်တွေကို ဟန်ချက်ညီညီ ကောင်းကောင်း လှုပ်ရှားနိုင်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။
လေးဖက်ထောက်တာက ဘေဘီလေးကို အခုလိုတွေ ထောက်ကူပေးတယ်ဆိုတော့ ဘေဘီလေးက လေးဖက်မထောက်ရင်ရော ဘေဘီလေးမှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်မလားဆိုတော့ ဆောင်းပါးလေးကို ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား……
ဘေဘီလေးတွေ လေးဖက်မထောက်တာ ပုံမှန်ပဲလား …….
ဘေဘီလေးက လေးဖက်မထောက်တာ ပုံမှန်ပဲလား …… ဆိုတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ အချို့သော ဘေဘီလေးတွေက သူတို့ရဲ့ လက်ကလေးတွေနဲ့ ကြမ်းပြင်တွေကို ထိတွေ့ ကိုင်တွယ်ရမှာကို သဘောမတွေ့တာကြောင့် လေးဖက်မထောက်တာ ဖြစ်နိုင်သလို သူတို့ရဲ့ လက်က ကြွက်သားလေးတွေက သေချာ မဖွံ့ဖြိုးတာမျိုး သူတို့လေးတွေ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ယုံကြည်မှု နည်းတာတွေကြောင့် လေးဖက် မထောက်ကြတာပါ။
အချိုသော ဘေဘီလေးတွေက မတ်တတ် မရပ်ခင်အထိ မိဘတွေကို ချီခိုင်းရင်း ခြေထောက် ကြွက်သားလေးတွေ သန်မာလာချိန်မှာ ထိုင်တာ ကနေ အမှီအတွယ်တွေ လူကြီးတွေကို အားပြုပြီး မတ်တတ်ရပ်ကြပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေက လေးဖက်ထောက်ပြီးမှ မတ်တတ်ရပ် ကြတာ မှန်ပေမယ့် အချို့သော ဘေဘီလေးတွေကတော့ လေးဖက်ထောက်တဲ့ အဆင့်ကို ကျော်ပြီး မတ်တတ်ရပ်ဖို့ လုပ်ကြပါတယ်။
လေးဖက် မထောက်တာ​ကြောင့် ဘေဘီလေးမှာ ထိခိုက်သွားတာမျိုး တစ်စုံတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။
လေးဖက်မထောက်တော့ ဘာကောင်းသွားလဲ …..
ဘေဘီလေးက လေးဖက် မထောက်တဲ့အခါ ပါးစပ်ထဲကို တွေ့ကရာတွေ ကောက်ထည့်မိနိုင်ခြေ နည်းသွားသလို ကြမ်းပြင်မှာ ရှိနေတဲ့ မမြင်ရတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ လက်ကနေတဆင့် ပါးစပ် နဲ့ အစာခြေစနစ် ထဲကို မဝင်ရောက်တော့တဲ့အတွက် ဘေဘီလေးမှာ ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောတာ၊ အစာခြေစနစ် ပိုးဝင်တာမျိုးတွေ မဖြစ်စေဖို့ ရာနှုန်း တစ်ခုအထိ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ….. ဘေဘီလေးတွေ လေးဖက်မထောက်တာ ပုံမှန်ပဲလား ……. ဆိုတဲ့ အဖြေလေးကို သိသွားပြီဆိုတော့ ဘေဘီလေးက လေးဖက်မထောက်လို့ ဆိုပြီး စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့နော်။ ဘေဘီလေးက လေးဖက်မထောက်တာက ဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံမှန် မဟုတ်တာ မဟုတ်ပါဘူး မေမေဖေဖေတို့ရေ ………
တစ်ခုရှိတာက လေးဖက်လည်း မထောက်သလို လေးဖက်ထောက်ပြီးရင် ဆက်ဖြစ်လာရမယ့် မတ်တပ်စမ်းတာ၊ လမ်းလျှောက်တာတွေပါ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေတာလားဆိုတာ သိဖို့ ကလေးဆရာဝန်နဲ့ စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Crawling May Be Unnecessary for Normal Child Development https://www.scientificamerican.com/article/crawling-may-be-unnecessary/ Accessed Date 1 October 2021
Do Babies Need to Crawl? https://www.parenting.com/baby/do-babies-need-to-crawl/ Accessed Date 1 October 2021